World Photography Day (Myanmar): 2008
sayaba sent youafriend request on WeGame :)
sayaba wants you to join WeGame
Is sayaba (sayaba.mdy@gmail.com) your friend?
WeGame allows you to record and watch awesome gaming videos.
611 Mission St, 2nd Floor, San Francisco, CA 94105
Posted by Mg Ba Oo (Mandalay) at Permalink |2comments |
Fwd: World Photography Day 2008 (( august 19 ))
နက်နဲသိမ်မွေ့သောပညာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာ မွေးဖွားရာမြေ
ကျွန်တော်ဟာ နေ့တဓူဝတွေ့ကြုံနေရတဲ့ သဘာဝအလှတွေကို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အလင်းရဲ့ စွမ်းပကားကြောင့် အရောင်မျိုးစုံကွန့်မြူးတဲ့ သဘာဝအလှတရားကို ရှာဖွေလေ့လာရင်း ဓာတ်ပုံပညာကို မွေ့လျောခဲ့ ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာဟာ ပုံရိပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အလင်းအပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ Photography ကို ဂရိဘာသာ စကားနဲ့ Photo (light) နဲ့ graphein (to draw) ဆိုတာက ဆင်းသက်လာပြီး Drawing with light အလင်းဖြင့် ရေးဆွဲခြင်း လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ၁၈၃၉ ခုနှစ်မှာ သိပ္ပွံပညာရှင် Sir John F.W.Herschel က စတင်အသုံးပြုခဲ့ ပါတယ်။ ၁၈၂၇ ခုနှစ်က Joseph Nicephore Niepce ရဲ့ ၈ နာရီကြာအချိန်ပေးပြီးရိုက်ကူးရတဲ့ နည်းပညာကို မိနစ် ၃၀ အောက်ရောက်တဲ့အထိ တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး ယနေ့ခေတ်သုံးဓာတ်ပုံပညာကို အစပျိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Louis Jacques Mande Dafuerre ရုပ်ပုံဖမ်းယူခြင်းနဲ့ ပုံဖော်ခြင်းနည်းပညာကို အပတ်တကုတ်ကြိုးစားခဲ့ရာက Daguerreotype ဆိုတဲ့ ယနေ့ခေတ်သုံးဓာတ်ပုံပညာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင်တီထွင်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Daguerreotype နည်းပညာကို ပြင်သစ်အစိုးရကို ရောင်းချခဲ့ပြီးနောက် ဓာတ်ပုံပညာရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကမ္ဘာတစ်ခွင်ရှိ ပြည်သူများသို့ ၁၈၃၉ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကြေငြာခဲ့ကာ ယနေ့ဓာတ်ပုံပညာရဲ့ ခရီးလမ်းကို စတင် ပါတော့တယ်။
၁၈၃၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က အများပြည်သူကိုစတင်ကြေငြာခဲ့တဲ့ ယနေ့ခေတ်သုံးဓာတ်ပုံပညာဟာ ယခုဆိုရင် သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၁၇၀ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အလျောက် ခေတ်အဆက်ဆက် ကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီး ယခုအခါမှာ လူတိုင်း အသုံးချနိုင်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ဖို့ ကင်မရာ ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းပေါင်းများစွာ ကို သယ်ဆောင်သွားကာ ရိုက်ကူးခဲ့ကြရာက အင်္ကျီအိတ်ကပ်ထဲမှာ ထည့်သွားလို့ရတဲ့ ကင်မရာလေးတွေ ဖြစ်လို့လာပါ ပြီ။ ခေတ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အညီ အခုလို အီလက်ထရောနစ်ခေတ် သတင်းခေတ် ကြီးမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သုံး ခေတ်မီကင်မရာတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလာကြပါပြီ။ ဒစ်ဂျစ်ခေတ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတစ်လုံးကို အိမ်တိုင်းမှာ ရှိနေပြီလို့ ပြောနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်လည်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ တွေကြား ဗျာများခဲ့ရပါတယ်။ ဗျာများခဲ့ရတာကတော့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတစ်လုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ် ရမယ်ဆိုတာ ပါပဲ။ အဲဒီလို ဦးဏှောက်ခြောက် ပြီး ဗျာများခဲ့ရတဲ့ ကင်မရာတစ်လုံးရွေးချယ်မှုကို အလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အနည်း ငယ်တင်ပြချင်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်ပြောကြမယ်ဆိုရင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေကို အိမ်သုံးကင်မရာအသေး(End User)၊ အပျော်တမ်း ကင်မရာသမားများ သုံး ကင်မရာအလတ် (Consumer) နဲ့ စီးပွားဖြစ်သုံးကင်မရာအကြီး (Professional) ဆိုပြီး သုံးပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် သေး၊ လတ်၊ ကြီး ဆိုပေမယ့် အပျော်တမ်းသမားသုံးကင်မရာအလတ် နဲ့ စီးပွားဖြစ်သုံးကင်မရာအကြီးတွေဟာ အရွယ်အားဖြင့် မတိမ်းမယိမ်းတွေပါ။ အရွယ်ငယ်ပေမယ့်လည်း အစွမ်းထက် တဲ့ကင်မရာတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရဲ့ အရည်အသွေးကို အကြမ်းအားဖြင့် ကင်မရာမှာပါတဲ့ Resolution က ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ အရည်အသွေး မြင့်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို လိုချင်ရင် Resolution များဖို့လိုပါတယ်။ Resolution ကို5Megapixel, 8 MegaPixel, 10 MegaPixel အစရှိသဖြင့် MegaPixel အရေအတွက်နဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ MegaPixel တူမယ်ဆိုရင် Sensor အရွယ်အစားအကြီးကိုသုံးတဲ့ Professional ကင်မရာတွေက အရည်အသွေးပိုကောင်းပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေမှာ မှန်ဘီလူးကနေတဆင့် ရုပ်ပုံဆွဲယူရိုက်နိုင်တဲ့ zoom နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Optical နဲ့ Digital zoom ပါ။ Optical zoom ဆိုတာက မှန်ဘီလူးကနေ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပြီး Digital zoom ဆိုတာကတော့ ကင်မရာမှာပါတဲ့ ကွန်ပျူတာကနေ ချဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်တကယ်ချဲ့ယူနိုင်တဲ့ Optical zoom ကသာလျှင် ဓာတ်ပုံရဲ့ အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ မှန်ဘီလူးဟာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ Leica, Carl Zeiss, Nikkor, Canon, Fujinon အစရှိတဲ့ မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြုထားမယ် ဆိုရင် ဓာတ်ပုံဟာ ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားပြီး အရောင်အသွေးမှန်ကန်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေရဲ့နောက်ဖက်မှာ ရိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်နိုင်မယ့် LCD Monitor တွေပါလေ့ရှိပါတယ်။ ရိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်နိုင်တော့ ရိုက်ထားတာမကောင်းရင် ချက်ချင်းပြန်ရိုက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရှိတာပေါ့။ သို့သော်လည်း Snap Shoot ရိုက်ရတဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲမျိုး၊ သတင်းဓာတ်ပုံမျိုးကိုတော့ ပြန်ရိုက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကနည်းတော့ ပုံကောင်း ရအောင် ရိုက်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြန်ရိုက်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အချက် ကလေးတစ်ချက်ထဲနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့အခါ အာရုံထားပြီး ရိုက်ကူးမှုတွေ လျော့နည်းလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာတစ်လုံးကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ ကင်မရာရဲ့အရွယ်အစား၊ ပုံထွက်အရည်အသွေး(Resolution)၊ မှန်ဘီလူး တို့ဟာ အဓိကရွေးချယ်စရာဖြစ်ပြီး LCD Monitor အရွယ်အစား၊ ညအမှောင်မှာ ရိုက်နိုင်စွမ်း၊ လက်တုန်ခြင်းကြောင့် ပုံရိပ်ဝါးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စနစ် အစရှိတဲ့ ရွေးချယ်စရာ Function တွေ တပုံတပင် ရှိပါသေးတယ်။ Smile Shutter လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာက ရီမှ ရိုက်တဲ့စနစ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိနေပါပြီ။ ရီမှ လှတယ်လို့ ယူဆသူတွေ အတွက် အဲဒီ Smile Shutter ပါတဲ့ကင်မရာက မရီမခြင်း စောင့်ပြီး ရိုက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာဝါးနေတယ်လို့ ယူဆ နေသူများအတွက်တော့ Face Dectection လို့ ခေါ်တဲ့ Function က မျက်နှာတွေကို အသားပေးပြီး ပြတ်သား အောင် ဆောင်ရွက်ကာ ရိုက်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တုန်တတ်တဲ့သူတွေ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ် စိတ်လှုပ်ရှား တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ ပုံတွေဟာ ၀ါးသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပုံရိပ်တွေ မ၀ါးရအောင် Image Stabilization က ပုံရိပ်ကို မ၀ါးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသတဲ့ဗျာ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ မျက်စိတမှိတ်လျှပ်တပြတ်အတွင်း ပုံရိပ်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဒင်္ဂဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ လျှပ်တပြတ်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အလင်းအမှောင်နဲ့ ပုံရိပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဓာတ်ပုံ ဖွဲ့စည်းမှု (Composition)ကို အမိ အရရိုက်ယူရတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လွယ်မယောင်နဲ့ နက်နဲသိမ်မွေ့လှ ပါတယ်။ အချိန်ကိုက် အဆုံးအဖြတ်ပေး၊ အချိန်ိကိုက်ပုံရိပ်ဖမ်းယူရတဲ့ ဓာတ်ပုံပညာဟာ အရင်ရှိနှင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံပညာရပ်နဲ့ ယနေ့ ပြောဆိုနေကြတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာဟာ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရဲ့ အခြေခံ သဘာတရားတွေဟာ ပြောင်းလဲမသွားပဲ အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာ ကင်မရာကသာလျှင် ခေတ်နဲ့အညီ တိုးတက်လာပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာခေတ်ကို ရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာခေတ်မှာ ဓာတ်ပုံပညာရပ်က အပြောင်းအလဲတွေရှိလာပါတယ်။ အဓိကအကျဆုံး အပြောင်းအ လဲကတော့ ရိုက်ကူးရတဲ့စနစ်ဟာ ပိုမိုလွယ်ကူလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတစ်လုံးကို အခုဝယ် အခုရိုက်နိုင်တဲ့ အဆင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ကင်မရာနဲ့ မစိမ်းတော့ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေ တိုးလာတာက လည်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာရဲ့ လွယ်ကူစွာရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ စွမ်းပကားကြောင့်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ VISUAL ART ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံပညာဟာ မြင်တာနဲ့ အလွယ်တကူတတ်မြောက်နိုင်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတော့လည်း အခြေခံဖြစ်တဲ့ သီအိုရိကို နားလည်းသဘောပေါက်အောင် လေ့လာသင်ယူထားသင့်ပါတယ်။ သီအိုရိဟာ အမြဲတမ်း မှန်ကန်နေတဲ့ သဘောတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် တီထွင်ဖန်တီး ရိုက်ကူးတဲ့အခါ မှာတော့ သီအိုရိမှသွေဖယ်ပြီးရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ သီအိုရိကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာရမယ်လို့တော့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပေမယ့် တိကျသေချာတဲ့အခြေခံမရှိဘူးဆိုရင် တိုးတက်ဖို့ဆိုတာလည်း ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပုံကောင်း တစ်ပုံရဖို့အတွက် သီအိုရိကို အခြေခံပြီး မိမိရဲ့ စိတ်ကူစိတ်သန်းတွေ ပေါင်းစပ်ကာ ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလို ရိုက်ကူးမှသာလျှင် အနုပညာမြောက်တဲ့ ဓာတ်ပုံ ကောင်းတစ်ပုံဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးဖို့အတွက် ၀ါသနာပါသူအများအပြားကို တွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ကင်မရာရှိသူတွေရှိသလို ကင်မရာ တစ်လုံးတစ်လေမှ မပိုင်ဆိုင်သေးသူတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံအသင်းနှစ်ခု မန္တလေးမှာရှိပါတယ်။ သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အထက်မြန်မာ ပြည်ဓာတ်ပုံအသင်းနဲ့ သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းဆိုပြီးရှိပါတယ်။
ဓာတ်ပုံအသင်းနှစ်ခုစလုံးမှာ အသင်းဝင်အရေအတွက်က ၁၀၀၀ ကျော်စီရှိပါတယ်။ လပတ်စဉ်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ၊ နှစ်ပတ် လည်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ၊ အထူးဖိတ်ခေါ်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပပေးပြီး ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင် ဓာတ်ပုံအသင်းသားတွေကို လက်ရည်သွေးစေကာ ဓာတ်ပုံပညာကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံသင်တန်း များကိုလည်း သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပြပွဲများကျင်းပခြင်း၊ နိုင်ငံတော်မှကျင်းပသော ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများဝင်ရောက်စေခြင်းများအတွက်လည်း ဓာတ်ပုံအသင်းများက ဦးဆောင်ကာ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ လပတ်စဉ်ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများအဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ၁၀ ပွဲကျင်းပပေးပြီး ၅ ပွဲကို မော်ဒယ်အလှမယ်နဲ့ ကျန် ၅ ပွဲကို ရှုမျှော်ခင်းဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲများဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်လုံးယှဉ်ပြိုင်ပြီး အမှတ်အများဆုံး ရရှိသူကိုတော့ အသင်းရဲ့ တံခွန်စိုက်ဆုကြီးကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာရေးကော်မတီက ကျင်းပပေးတဲ့ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံပြိ်ုင်ပွဲ၊ မန္တလေးတောင် နွေမိုးဆောင်းအလှဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ၊ ဂေါက်ကွင်းဖွင့်ပွဲဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ အစရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းနဲ့ အထက်မြန်မာပြည်ဓာတ်ပုံအသင်းမှ အသင်းဝင် ဓာတ်ပုံ ၀ါသနာရှင်များဟာ အားတက်သရော ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဝါသနာပါသူတွေများပြားလာသလို ဓာတ်ပုံပညာမှာ ကွန်ပျူတာတွဲဖက်လာပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို တွေ့မြင်လာရတာဟာဖြင့် အလွန်အင်မတန်မှ အားရစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာရပ်မှ Darkroom Technique ဟာ Light room အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး အမှောင်ခွင်းကာ အလင်းဆောင်သကဲ့သို့ ဖြစ်လာပါပြီ။ မမြင် မစမ်းနဲ့ အမှောင်ထဲမှာ ပုံကောင်းတွေရအောင် ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကနေ ယနေ့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပဲ လိုတာ ထည့်၊ မလိုတာဖြုတ်၊ ဟိုရွေ့ဒီပြောင်းလုပ်လို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘီစီ ၄ ရာစုကထဲက တရုတ်နဲ့ ဂရိ အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များဟာ မှန်ဘီလူးနဲ့ ကင်မရာရဲ့ သဘောတရားကို ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၆ ရာစုကထဲကစတင်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံပညာ ဟာ အရင်က နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်အောင်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၇၀ လောက်က အများပြည်သူအသုံးပြုဖို့ ကြေငြာခဲ့တဲ့ ၁၈၃၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ကို ယခုအခါ ဓာတ်ပုံပညာနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုနေကြပြီဖြစ်ပါ တယ်။ ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်၊ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံပညာနေ့မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံပြပွဲပြသခြင်း၊ ဓာတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုနေကြပါပြီ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ တော့ မန္တလေးဓာတ်ပုံအသင်းကလည်း သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာပဲ မန္တလေး ကန်တော်ကြီး ပန်းခြံမှာ မော်ဒယ်အလှမယ် ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံပညာနေ့ကို ကြိုဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံနဲ့ မစိမ်းတဲ့ သင်လည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ပါဝင်ရိုက်ကူးရင်း ကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင် လားဗျာ။
Posted by kkwinmoe at Permalink |0comments |
Tags : Friends Week
Welcoming the World Photography Day.
Posted by Tun Myo Hlaing at Permalink |0comments |
Welcome .. World Photography Day 2008 (August 19)
၂၀၀၈ ဓာတ်ပုံပညာနေ့ ရောက်တော့မယ် ....
တစ်လပဲ လိုတော့တယ် .....
ဓာတ်ပုံတွေတင်ပေးရင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံပညာနေ့ကို ကြိုဆိုကြပါဆိုလားဗျာ ......
ဓာတ်ပုံတင်ချင်သူများ အီးမေးလ်လိပ်စာလေးကို cbox မှာရေးပေးခဲ့ပါ .... invite လုပ်လိုက်ပါ့မယ် .....
ဒါမှမဟုတ် mgbaoo.mdy@gmail.com ကို ဓာတ်ပုံလေးပို့လိုက်ပါ ..... တင်ပေးပါ့မယ် .......
Posted by Native Flowers Lovers at Permalink |2comments |
Tags : hana san
Sunset from Bue Pagoda
ပုဂံကို ရောက်ခဲ့တုန်းက ဗူးဘုရားမှ နေ၀င်ချိန်ကိုရိုက်ထားတာပါ။ အပျော်တမ်းကင်မရာနဲ့ပါပဲ။ Photoshop နဲ့တော့ နည်းနည်းလေး ပြင်ထားတယ်။
Posted by Chan Mya Soe at Permalink |0comments |
Tags : bagan, cms, sunset
ဒီပုံလေးကို ကုန်းမြင့်လေးပေါ်က လှမ်းရိုက်ထားတာပါ။ ရိုက်တုန်းကတော့ ရေတွေ စီးဝင်ပြီး ချောင်းငယ်လေး ဖြစ်နေတာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး။
Posted by Anonymous at Permalink |0comments |
ဒီပုံက PhotoShop မှာ လက်ဆော့ထားတာ.... :)
Taman Ular Sawa Waterfall
ဒီပုံကိုလဲ Photoshop မှာ လက်ဆော့ကြည့်တာ ဘာကွာလဲလို့.... :)
Toll Gate of Malaysia
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၇) ရက်နေ့က ညလေးတို့ Port Dickson Beach ကို သွားတုန်းက ရိုက်လာခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပါ။ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို Add ထားပေမယ့် ဓါတ်ပုံတွေ တစ်ခါမှ မတင်ဖြစ်သေးလို့ ခုတော့ သွားဖြစ်တုန်းခဏ ကင်မရာလေးလဲ ရှိတုန်းလေး ကြုံကြိုက်တာနဲ့ လက်ဆော့ ထားတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သည်းခံကြည့်ကြနော်....
Thank for your photo.
Posted by pandora at Permalink |0comments |
2007 ဖေဖော်ဝါရီလလောက်က ရိုက်ထားတဲ့ သစ်ကိုင်းပေါ်နှင်းတွေတင်နေတဲ့ပုံပါ။ ပြီးခဲတဲ့နှစ်ကတော့ နှစ်သစ်ကူးအထိ နှင်းတွေမကျပါဘူး။ အခုတော့ နှင်းပါးပါးလေးတော့ ကျပါရဲ့။ အခုပုံထဲမှာလောက်နှင်းမကျပါဘူး။ နှစ်သစ်ကူးအမှတ်တရအနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။ ရောက်လာသူအားလုံး နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by ဇနိ at Permalink |0comments |
Tags : Russian winter, zenith